Mareykanka oo liiska argagixisada ku daray amiirka Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo liiska argagixisada ku daray amiirka Alshabaab
Dowladda Mareykanka, ayaa liiska ururrada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh argagixisanimada ku dartay hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diiriye iyo sarkaal kale oo kooxda ka tirsan.
War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa lagu sheegay in Axmed Diiriye oo loo yaqaano Abuu-Cubeyd uu amray weerarro ay Al-Shabaab ka geysatay dalalka Soomaaliya iyo Kenya, tan iyo markii uu xilka qabtay, kaddib dilkii hoggaamiyihii Al-Shabaab, Axmed Cabdi Godane bishii September, sannadkii hore.
Mareykanku, wuxuu sheegay in Abuu-Cubeyda uu ku shaqeeyo mabaa’diidii Godane, isagoo xubin firfircoon ka ah Al-Qaacidda.
Mahad Karatee oo ah madaxa sirdoonka Al-Shabaab, ayaa isna liiska argagixisada lagu daray, waxayna wasaaradda arrimaha dibaddu sheegtay in uu madax u yahay kooxda Amniyaatka oo ka mas’uul aheyd weerarkii jaamacadda Garissa.
Liiska cusub ayaa yimid laba cisho kaddib, qarax ismiidaamin ah oo Al-Shabaab ay ku dishay shaqaalaha Qaramada Midoobey, magaalada Garowe. Xukuumadda Washington, ayaa Al-Shabaab u aqoonsatay koox argagixiso sannadkii 2008.